Komishanka Doorashooyinka Somaliland Oo Shaaca Ka Qaaday Inay Xukuumaddu Shubtay Kharashkii Doorashooyinka(Hadhwanaagnews) Sunday, July 08, 2012 (HWN)-Komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa maanta shaaca ka qaaday inay xukuumadu ay bixisay oo ay ku wareejisay lacagtii 25%-ka ahayd ee loogu tallo-galay in dawladdu ay kaga qeyb qaadato kharashaadka lagu qabanayo doorashooyinka goleyaasha deegaanka ee aan wali la cayimin xiliga ay qabsoomayaan.Hargeysa(HWN)-Komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa maanta shaaca ka qaaday inay xukuumadu ay bixisay oo ay ku wareejisay lacagtii 25%-ka ahayd ee loogu tallo-galay in dawladdu ay kaga qeyb qaadato kharashaadka lagu qabanayo doorashooyinka goleyaasha deegaanka ee aan wali la cayimin xiliga ay qabsoomayaan.
Sidaa waxa Afhayeenku Md. Maxamed Axmed Xirsi (Geelle) ku sheegay shir jaraaid oo uu maanta ku qabtay xarunta Gudidda Doorashooyinka, waxaanu xusay inay lacagtii xukuumadda laga sugayay ee lagu qabanayay doorashada Golayaasha deegaanka lagu shubay bog xisaabeedka ay Komishanku ku leeyihiin Baanka dhexe ee Somaliland. Waxaan maanta jecelahay inaan ummadda u cadayno in xukuumadda Somaliland ay bixisay oo ay bog xisaabeedka (Account)-ka komishanku ku leeyahay baanka dhexe ay ku shubtay oo aanu gacanta ku hayno. Lacagtan oo ah 25%
xukuumadda lagu qeybiyay inay kaga qeyb qaadato dhaqaalaha lagu qabanayo doorashada Goleyaasha deegaanka dalka,ayuu yidhi Md. Maxamed Axmed.
Afhayeenku waxa uu sheegay inay ka filayaan qaadhaan-bixiyeyaasha caalamka ee taageera dimuqraadiyadda Somaliland kharashkii ay kaga qeyb qaadan jireen hirgelinta doorashooyinka Somaliland oo dhan 75%.
Waanu ka sugaynaa qaadhaan-bixiyeyaasha dhaqaalihii ay inagu taageeri jireen. Waxaanu ka haysanay balan qaad ah inay doorashadanna ina taageerayaan oo aanay inagaga baxaynin,ayuu intaas raaciyay Afhayeenka Komishanka Doorashooyinku.
Afhayeenka Komiishanku waxa uu ku dooday inay xubnaha Komishanku ay u kala bixi doonaan goboladda dalka si ay u soo furtaan xafiisyadoodii gobolada wadanka. Markaanu dhaqaalahaasi ka helo qaadhaan-bixiyeyaasha ayaanu cayimi doonaa xiliga ay doorashaddu qabsoomayso.Ayuu yidhi Afhayeenku Mustafe-Jannaale